Fomba ahazoana lisansa famoahana marijuana any Ohio - lalàna momba ny rongony any Ohio
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Ohio
Ahoana ny fomba hahazoana an Lisansa famoahana marijuana any Ohio
Te hahafantatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Ohio ve ianao? Tonga teo amin'ny toerana mety ianao.
Miaraka amin'ny porofo goavambe manohana ny fahafahan'ny marijuana ara-pahasalamana hanatsara ny fahaizan'ny fiainana ho an'ny mponina ao Ohio, dia nandalo ny depiote Trano Bill 523 tamin'ny fahavaratry 2016. Ny lalàna dia namela ny marijuana ara-dalàna ho ara-dalàna na aiza na aiza manerana ny fanjakana buckeye.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Ohio
Ny fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana dia afaka miova amin'ny fotoana rehetra, noho izany dia ampirisihina ireo mpangataka mety hanontany amin'ny Biraon'ny fivarotam-panafody.
Ahoana ny fanamarihan'i Ohio ny fampiharana?
Ny fangatahana fahazoan-dàlana hiasa sy feno dia apetrak'ity masoivoho ity ary omena amin'ny fifaninanana mifototra amin'ny fepetra efa voafaritra. Ny mpangataka dia tsy maintsy manome ny porofon'ny fahaizany.
Fepetra fangatahana fahazoan-dàlana
Fananan'ny vondrona sahirana ara-toekarena